कोरोना जोखिम रोक्ने पूर्व तयारीमा जुट्यो तिलोत्तमा नगरपालिका - लण्डन काठमाडौँ
कोरोना जोखिम रोक्ने पूर्व तयारीमा जुट्यो तिलोत्तमा नगरपालिका
लण्डन काठमाडौं / तिलोत्तमा, फागुन १९ । संघीय र प्रदेश सरकार कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्न पूर्वतयारीमा जुटिरहँदा स्थानीय सरकारले पनि पूर्वतयारीका काम अघि बढाएका छन् ।
यसैक्रममा तिलोत्तमा नगरपालिकाले कोरोना भाइरसको जोखिम रोक्ने पूर्वतयारीको सन्दर्भमा सोमबार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुसँग छलफल गरेको छ ।
पूर्वतयारीका कामलाई व्यवस्थित बनाउन नगरपालिकाले क्रिमसन अस्पताल र नगरभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका इञ्चार्जहरुसँग अन्तरक्रियात्मक बैठक गरेको हो ।
बैठकले क्रिमसन अस्पतालमा कार्यरत फिजिसियन डा. कृष्णचन्द्र गोदारको संयोजकत्वमा स्वास्थ्यकर्मीहरु सम्मिलित पूर्वतयारी समन्वय समिति गठन गरेको छ ।
समितिले कोरोनाबाट बच्ने उपायका सन्दर्भमा जनचेतना अभिवृद्धि, नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन र कोही संक्रमित भएमा गरिने उपचारको बारेमा संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नेलगायतका काम गर्नेछ ।
बैठकमा फिजिसियन डा. गोदारले कोरोना संक्रामक रोग भएको र यसले सबैभन्दा बढी फोक्सोमा असर पुर्याउने बताउनुभयो । उहाँले यसका लक्षणहरु अन्य भाइरल संक्रामक रोगसँग मिल्दोजुल्दो हुने बताउँदै लक्षणको आधारमा बिरामीको उपचार हुने गरेको जानकारी दिनुभयो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत माधवप्रसाद शर्माले नगरपालिका कोरोना जोखिम रोक्न सबैसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सेमराबजार स्वास्थ्य चौकीका डा. विनोद बढई, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मोतिप्रसाद पौडेल, सिनियर अहेव अधिकृतद्धय गणेश गौतम, ईश्वरी पौडेल, प्रेस सल्लाहकार बीपी गौतम, क्रिमसन अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत मनमोहन भट्टराई, नर्सिङ्ग सुपरभाइजर अम्बिका ज्ञवालीलगायतले कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।